Hordhac: Real Madrid v Real Sociedad – Cristiano Ronaldo Oo Ganaax Labo Kulan Ah Uu Maanta U Bilaabanayo.
Isagoo durbaba guul ka soo gaaray Barcelona xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee Spain, David Moyes ayaa u kaxeyn doona kooxda Real Sociedad garoonka Bernabeu halkaasoo ay galabta ku wajahayaan kooxda Real Madrid isagoo soo dhameystay ganaax labo kulan ah oo uu ku maqnaa.
Howl adag ayaana sugeysa kooxda martida ah iyadoo Real Madrid ay hogaanka u heyso La Liga islamarkaana kaliya hal jeer lagu hor garaacay taageerayaashooda xilli ciyaareedka oo dhan.
Si kastaba, Los Blancos waxaa ka maqnaan doona Cristiano Ronaldo kaasoo uu u bilaabanayo ganaax labo kulan ah ka dib markii uu laaday xiddiga Cordoba Edimar kulankii ay isbuucii hore 2-1 kaga badiyeen kooxda ku cusub xilli ciyaareedkan La Liga.
Madrid ayaana lagu qasbay kulankaas inay sugto ilaa iyo xilli danbe inay hesho guusha, iyadoo Gareth Bale uu ismuujiyay markii Ronaldo casaanka la siiyay isagoo rigoore dhaliyay xilli danbe ciyaarta.
Carlo Ancelotti ayaa rajeynaya in xiddiga reer Wales oo xilli ciyaareedkan mararka qaar lagu dhaleeceeyay qaab ciyaareedkiisa ama go’aan qaadashadiisa inuu mar kale buuxiyo booska uu baneeyay xiddiga reer Portugal.
Inkastoo uu ka maqan yahay Ronaldo, Madrid ayaa heysata awood ay koox walba dhibaatada adduunka ugu abuurto, waxaana guul ay gaaraan markii afaraad oo isku xigta ay ka caawin doontaa inay si ku meel gaar ah hogaanka horyaalka ugu sii qabtaan afar dhibcood madaama Barca ay ciyaareyso berrito.
Kaliya Atletico ayaa Real ka horjoogsatay inay ku badiyaan Bernabeu xilli ciyaareedkan, halka ay badiyeen lix kulan oo isku xigta horyaalka oo ay ku ciyaareen gurigooda, iyagoo mudadaas dhaliyay 24 gool halka laga dhaliyay kaliya seddex gool.
Isco, Pepe iyo Luka Modric ayaa dhamaantood shaki ku jiraa taasoo la micno ah in Sami Khedira iyo Raphael Varane inay sii ceshan doonaan booskooda shaxda kooxda.
Kulanka: Real Madrid v Real Sociedad
Real Madrid: Casillas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Khedira, Kroos, Rodriguez; Bale, Benzema, Jese
Real Sociedad: Rulli; Elustondo, Gonzalez, Martinez, Yuri; Granero, Pardo, Vela, Prieto, Canales; Agirretxe
Hordhac: Chelsea v Man City – Costa & Fabregas Oo Seegaya Kulan Horyaalka Lagu Go’aansan Karo & Lampard Oo Ku Laabanaya Stamford Bridge.
Caawa haddii Eebe idmo waxaa garoonka Stamford Bridge isku arki doona kooxaha ku hardamaya hanashada horyaalka Ingariiska iyadoo Chelsea ay soo dhaweyn doonto kooxda horyaalka difaacaneysa ee Manchester City.
Hordhac: Man United v Leciester City – Red Devils Oo U Tafaxeedaneysa Inay Ka Aarsato Dawacooyinka
Kulanka: Man United v Leciester City
Manchester United ayaa ku jirta kaalinta afaraad waxaana ay diyaar u yihiin inay u dagaalamaan inay ku soo laabtaan Champions League, halka kooxda Leicester City ay u hooseyso horyaalka islamarkaana aysan ka fogaan karin inay heerka labaad u laabtaan.
Ku guuldareysigii Man United inay shabaqa ka soo taabato kooxda heerka afaraad ee Cambridge United ee FA Cup ayaa keentay in jamaahiirta United ay caroodaan, waxaana ay taasi ku hogaamisay in dib u qiimeyn lagu sameeyo kooxda Louis van Gaal.
Red Devils ayaana raadineysa inay maanta ilowsiiso jahaamiirteeda natiijadii FA Cup oo ay ka aarsato kooxda Leciester City kuwaasoo horaantii xilli ciyaareedkan 5-3 kaga badiyay.
Xiddiga khadka dhexe ee Manchester United Michael Carrick ayaa dhaawac ku maqnaan doona muddo afar isbuuc ah.
Ashley Young ayaa ku dhow inuu ka soo laabto dhaawac muruqa ah, halka Jonny Evans iyo Chris Smalling ay qeyb ka ciyaari karaan kulankaan.
Matthew Upson ayaa ugu dnabeyn ciyaari kara kulankiisii ugu horeysay ee Leciester CIty ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac cagta ah oo soo gaaray bilowgii xilli ciyaareedka.
Matty James ayaa ganaax ku maqan, Riyad Mahrez ayaa isna Algeria kula maqan koobka Qaramada Afrika, Kasper Schmeichel iyo Chris Wood ayaa iyagana dhaawac ah.
Man United (4-3-1-2): De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Shaw; Di Maria, Blind, Fellaini; Rooney; Van Persie, Falcao.
Leciester City ( 4-4-2): Hamer; Konchesky, Moore, Morgan, Simpson; Schlupp, Cambiasso, Drinkwater, Vardy; Kramaric, Ulloa.
Hordhac: Liverpool v West Ham – Jamaahiirta Reds Oo Maanta Dib U Arki Doona Xiddigooda Daniel Sturridge
Kulanka: Liverpool v West Ham
Waxa ay u aheyd isbuuc xamaasad leh kooxda Liverpool ka dib markii ay si ciriiri ah guuldarro kaga soo gaartay Chelsea waqtigii dheeriga ahaa ee lugta labaad ee semi-finalka Capital One Cup.
Waxa ay u baahnaan doonaan inay taasi si dhaqso ah isaga ilaawaan kulanka maanta ee West Ham, kuwaasoo hal dhibic iyo hal boos ka sareeya iyaga, islamarkaana ka soo badbaaday kulankiii FA Cup ee ay martida u ahaayeen Bristol City isbuucii hore.
Taageerayaasha Liverpool ayaa isha ku haya soo laabashada Daniel Sturridge iyagoo ku soo dhaweynaya gacmo furan ka dib markii uu muddo dheer dhaawac ku maqnaa. Ku dhawaad waa shan bilood markii ugu danbeysay ee uu Sturridge ciyaaro, waxaana ay u muuqataa inuu maanta qeyb uun ka ciyaari doono kulanka Anfield.
Liverpool ayaa war wanaagsan waxaa u ah inuu ku soo laabanayo Daniel Sturridge ka dib shan bilood oo uu dhaawac bowdada ah ku maqnaa.
Mamadou Sakho ayaa shaki uu ku jiraa inuu ciyaari karo ka dib dhibaato ka soo gaartay dhabarka kulankii ay guuldarada ka soo gaartay Chelsea ee habeenkii talaadada ee Capital One Cup.
West Ham ayaa rajo ka qabta in Carl Jenkinson, Alex Song iyo James Tomkins ay dhamaantood taam u noqdaan kulankaan ka dib dhaawacyo yaryar oo soo gaaraan isbuucaan.
Xiddiga Senegal Cheikhou Kouyate ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro ka dib markii ka soo laabtay koobka Qaramada Afrika.
Liverpool (3-2-4-1): Mignoler; Can, Skrtel, Sakho; Henderson, Lucas, Markovic, Moreno, Gerrard, Coutinho; Sterling.
West Ham (4-3-1-2): Adrian; Cresswell, Reid, Tomkins, Jenkinson; Song, Noble, Nolan; Downing; Sakho, Carroll
Barcelona Oo Atletico Madrid Gurigeeda Ku Soo Dubatay, Xili Ay Barca Iska Xaadirisay Wareega Afar dhamaadka Cop Del Rey
Barcelona ayaa kooxda Atletico Madrid gurigeeda ku soo garaacda,iyada oo guushan ku soo gaadhay 3:2. Barcelona ayay goolasha ku dhaliyeen Neymar oo laba gool udhaliyay iyo goolka kale oo uu Miranda iska dhaliyay. Barcelona ayaana iska xaadirisay wareega afar dhamaadka koobka Copa Del Rey. Waa kulankii saddexaad oo xidhiidh ah ee ay barcelona isla bishan Janaayo guuldaro bado Atletico Madrid.
Atletico Madrid ayaa gurigeeda ku soo dhawaysay kooxda Barcelona, kulanka lugta labaad ee Copa Del Rey. Barcelona oo kulankii hore ee Camp Nou 1:0 ku soo guulaysatay ayaa doonaysay inay u soo baxdo wareega afarta kooxood ee Copa Del Rey halka Atletico Madrid oo Real Madrid tartanka koobkan ka soo reebtay ay markale diyaar u ahayd inay Barcelona mariso wadadii ay Real Madrid soo tustay.
Suarez ayaa dib ugu soo laabtay shaxda Luis Enrique kadib markii uu kursiga kaydka ku jiray kulankii ay Barcelona 6:0 ku dubatay kooxda Elche. Shaxda Atletico Madrid ayay ka maqnaayeen Koke iyo Tiago kuwaas oo dhaawac kulankan ku seegay halka uu Diego Godin ganaax ku maqanaa.Griezmann iyo Fernando Torres ayaana kuwada bilawday weerarka A.Madrid.
Atletico Madrid ayaa markii ay ciyaartu bilaabantayba bilawday ciyaar weerar deg deg ku dhisan taas oo keentay inay daqiiqdii kowaad ee bilawgii ciyaartaba ay helaan goolka furitaanka, waxaana goolkaas u dhaliyay Fernando Torres oo markii ay ciyaartu socotay 40 seconds kooxdiisa udhaliyay gool furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Atletico Madrid ku soo ceshatay goolkii ay Barcelona kulankii hore ka soo dhalisay.
Waa goolkii saddexaad ee uu Torres udhaliyay Atletico Madrid taniyo markii uu dib ugu soo laabtay kooxdiisii hore ee A.Madrid.
Barcelona ayaa bilawday inay ka dagaalanto goolka lagaga naxsaday, waxayna goolka barbaraha la timid daqiiqdii 9 aad kadib markii uu Neymar udhaliyay goolkaaas. Kubbad uu marka hore shaqadeeda iska alhaa Messi isla markaana uu Suarez si fiican ugu dhiibay Neymar ayay Barcelona kula timid goolka barbaraha, waxayna ciyaartu noqtay barbaro 1:1 ah.
Waxaa markale si cajiib ah uwada ciyaaray Messi, Suarez iyo Neymar.Messi ayaa ka ciyaarayay baasha midig ee weerarka wuxuuna Atletico Madrid ku sameeyay dhibta ugu wayn. Neymar iyo Suarez ayaa iyaguna kulankan muujiyay isfahan fiican.
Daqiiqadii 18 aad ayuu Neymar kooxdiisa u dhaliyay goolka labaad balse goolkaas oo muran dhaliyay ayuu calan waduhu tilmaamay inay Offside Neymar ku jiray inkasta oo markii danbe ay u muuqatay inuusan Neymar Offside ku jirin.
Daqiiqadii 30 aad ayaa Atletico Madrid lagu abaal mariyay rekoodhe kaas oo uu Javier Mascherano qalad ku galay Juanfran, balse halka uu qaladku ka dhacay ayaa ka baxsanayd xariiqda xerada ganaaxa basle garsooraha ayaa rekoodhe tilmaamay waxaana goolka u badalay Raúl García. Garsooraha ayaa qalad ku lahaa inuu rekoodhe ka dhigo qaladka uu Mascherano galay, waxayna ahayd inuu lagaaga xorta ah u dhigo.
Markale ayay haddana Barcelona dadaal u gaashay inay iska soo celiso goolka looga hormaray, waxayna dadaal kadib heshay fursada ay ku heshay goolka labaad, waxaana goolkaas iska dhaliyay difaaca Miranda kaas oo kubbad uu Rakitic koorne ka soo tuuray isla markaana uu Busquets madaxa ugu darbeeyay dhinaca goolka A.Madrid ayuu Miranda isaga oo iska difaac isleh uu iska dhaliyay. ciyaarta ayaana noqotay barbaro 2:2 ah.
Waxaa si batay qaladkii uu garsooraha ciyaartu samaynay, wuxuuna daqiiqadii 41 aad Atletico Madrid ka diiday rekoodhe kadib markii kubbad uu Torres ku laagay goolka Barcelona ay gacanta kaga dhacday Alba laakiin garsooraha oo go’aan qaladkan markii hore Atletico Madrid rekoodhe ugu dhigay ayaan tilmaamin rekoodh.
Isla kubbadii ay Barcelona iska soo saartay uu Messi la soo dhex orday ciyaartoyda Atletico Madrid , wuxuuna kubbada ku joojiyay meel wax yar ka baxsan xerada ganaaxa A.Madrid kadib ayuuna si fiican kubbada uga dulqaaday ciyaartoyda A.Madrid.
Alba ayaana kubabda soo hormariyay goolka Atletico Madrid, waxaana si fiican goolkiisa labaad halkaa ku dhaliyay Neymar kaas oo ciyaarta ka dhigay 3:2 ay Barcelona markeeda hogaanka kula wareegtay.
qaybta hore oo shan gool la kala dhaliyay isla markaana ahayd ciyaar xiiso badan ayaa ku dhamaatay 3:2 ay Barcelona hogaanka ku haysay halka ay celcelis ahaana ciyaartu ahayd (2:4) ay Barcelona gacanta sare ku lahayd.Markii ay qaybtii hore ee ciyaartu dhamaatay ayay Neymar iyo Toress isku dhaceen taas oo ugu danbayn keentay in Gabi oo muran badan sameeyay la siiyo kaadhka cas.Laakiin markii casaanka la siiyay Gabi ayaan la arkayn. gadaal ayaanu idiinka soo gudbin doonaa warka Gabi insha Allaah.
Arda Turan ayaa isaguna kabtiisa ku weeraray calanwalaha isaga oo kabtiisa ku tuuray. laakiin Arda Turan ayaa ciyaarta isa sii watay.Arda Turan ayaa nasiib ku lahaa in aan ciyaarta laga saaray .Arda Turan ayaa la filayaa inuu ganaax ku mutaysan doono falka uu ku kacay ee ah inuu calanwalaha kabtiisa ku shiiday.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay ciyaartu u muuqatay in go’aan laga gaadhay qaybtii hore waxayna noqotay mid ay xamaasadii ka yaraatay.Daqiiqadii 70 aad ayuu Cani ku sigtay inuu kooxdiisa udhaliyo goolka barbaraha kadib markii uu kubbad gantaal ah ku tuuray goolka Barcelona balse goolahey Stegen ayaa kooxdiisa fursadaa ka badbaadiyay.
Dhamadkii ciyaarta ayay Barcelona samaysay fursado kale oo ay goolal kale ku dhalin lahayd. Ciyaartoyda Atletico Madrid ayaa bilaabay inay galaan qalaad badan taas oo keentay inay kaadhadh badan oo digniin ah qaataan.Daqiiqadii 84 aad ee dhamaadkii ciyaarta ayuu Mario Suárez qalad ku galay Messi wuxuuna Mario Suárez sii haystay kaadhka digniinta ah waxaana halkaa lagu siiyay kaadhka digniinta ah ee labaad iyo kaadhka cas oo ciyaarta lagaga saaray.
Ciyaartan ayaa laga bixiyay 10 kaadh oo digniin ah iyo 2 kaadh oo casaan ah halka ay labada kooxood iska dhaliyeen shan gool.Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:2 ay Barcelona guul kaga gaadhay Atletico Madrid oo ay gurigeeda Calderon ay marti ugu ahayd.Barcelona ayaana iska xaadirisay wareega afar dhamaadka koobka Copa Del Rey.
Ivory Coast Oo U Soo baxday Wareega Sideed Dhamaadka Koobka Qaramada Afrika, Mali Iyo Guinea Oo Isku Dhagsan Iyo Cemaroon Oo La Reebay
Waxaa xalay lagu kala baxay Groupka ugu danbeeyay ee tartanka qaramada Afrika waxaana Group D ka so baxayxulalka qaramada—–.Group D ayay kuwada jireen xulalka qaramada Cameroon, Ivory Coast, Guinea iyo Mali. dhamaan afartan xul qaran ayaa kulamada caawa ka hor fursad isku mid ah u haystay kadib markii ay labadii kulan ee ay hore u soo ciyaareen dhamaantood ay ka urursadeen min laba dhibcood. xulalka qaramada Group D kuwda jiray ayaa xulkastaaba laba kulan oo uu ciyaaray barbaro galay taas oo keentay inay isku dhibco iyo isku goolal dhamaantood noqdaan.
Kulamada dhex marayay xulalka qaramada kuwada jiray Group D ayaa u muuqday inuu final oo kale ahaa, xulkastaana wuxuu u dagaalamayay fursada ah inuu u soo baxo wareega sideed dhamaadka. kulanka Guinea iyo Mali ayaa isaguna ahaa mid aad u adag.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa labada xul lagu kala abaal mariyay laba rekoodhe taas oo ay Guinea ka faa’iidaysatay halka Mali ay iska qasaarisay.Daqiiqadii 15 aad ayaa Guinea lagu abaal mariyay rekoodhe kaas oo uu gool u badalay Kevin Constant, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Guinea hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Laba daqiiqo oo kaliya kadib ayaa Mali markeeda lagu abaalmariyay rekoodhe balse Seydou Keita ayaa xulka qarankiisa rekoodhahaas ka qasaaiyay, qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku dhamaatay 1:0 ay Guinea hogaanka ciyaarta ku haysay.
Qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Mali soo laabatay iyada oo dardar fiican ku socota taas oo keentay inay daqiiqadii 47 aad ee bilawgii qaybtii danbe ay helaan goolka barbaraha, waxaana goolkaas u dhaliyayModibo Maiga, kaas oo ciyaarta u badalay barbaro 1:1 ah. ciyaarta ayaana ku dhamaatay barbaro 1:1 taas oo keentay in lakala saari kari waayo labadan xul qaran. maanta ayaa la kala saari doonaa Guinea iyo Mali iyada oo quri tuur loo samayn doono.
Falanqeynta Kulanka Xiisha Iyo Xamaasadaleh Ee Atletico Madrid Vs Barcelona Ee Lugta Labaad Ee Copa Del Rey
Kulanka: Lugta labaad ee Copa Del Rey
Garoonka: Vecente Calderon
Kooxda Diego Simeone ee Atletico Madrid ayaa markeeda gurigeda Caldreno ku soo dhawayn doonta kooxda Barcelona. Kulankan ayaa ka tirsan lugta labaad ee Copa del rey wareegiisa sideeda kooxood. Barcelona ayaa lugii hore ee Camp Nou 1:0 ku soo guulaysatay.
Kooxda Luis Enrique ee Barcelona ayaa Atletico Madrid soo booqanaysa iyada oo kalsooni wayn qabta kadib markii ay labadii kulan ee ugu danbeeyay ay guula ka kaga soo gaadhay Camp Nou. Barcelona ayaa sidoo kale kalsooni wayn qabta kadib markii ay kulankii horyaalka ugu danbeeyay ay kooxda Elche 6:0 ku soo xasuuqday.Messi iyo Neymar ayaana ahaa labada xidiga ee kala dhantaalay Elche.
Messi oo kulankii Elche laba gool ka dhaliyay isla markaan ahaa xidigii Barcelona kulankii Camp Nou ee Atletico Madrid guusha ku hogaamiyay ayaa hadda ku jira qaab ciyaareed aad u fiican, wuxuuna durba xili ciyaareedkan dhaliyay 31 gool oo tartamada oo dhan ah.
Barcelona oo xili ciyaareedkii hore soo gaadhay finalka Copa Del Rey ayaa guuldaro finalkii koobkan kala kulantay Real Madrid oo ay kooxda Atletico Madrid tartankan ka soo cidhib tirtay.
Diego Simeone ayuu madax xanuun wayni haystaa ka hor kulankan kadib markii uu xaqiijiyay in Koke iyo Tiago ay dhaawac ku seegi doonaan kulanka lugta danbe ee ay kooxdiisu caawa la ciyaari doonto Barcelona. Dhinaca kale Diego Godin ayaa Atletico Madrid ganaax kaga maqnaan doona kulanka Calderon.
Dhinaca Barcelona Jeremy Mathieu ayaa isniin ku soo laabtay tabaabrka Catalonia balse ma kala cada inuu kulana ciyaari doono iyo inkale. Luis Suarez ayaa markale laga yaabaa inuu kursiga kaydka sii fadhiyo kadib markii uu macalinka Barcelona ee Enrique kulankii Elche arkay Barcelona oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigtay Suarez la’aantiis.
Liiska 18 ka ciyaartoy ee uu Diego Simeone u soo xushay kulanka Barcelona:
Moyá, Oblak, Siqueira, Gámez, Juanfran, Miranda, Giménez, Lucas, Mario, Raúl García, Arda, Gabi, Saúl, Cani, Griezmann, Mandzukic, Raúl Jiménez and Fernando Torres.
Ivanovic Oo Chelsea Guul Ku Hogaamiyay Iyo Blues Oo Iska Xaadirisay Finalka Capital One Cup Kadib Guul Ay Ka Gaadhay Liverpool
Kooxda Chelsea ayaa waqtiga dheeriga ah guul kaga gaadhay Liverpool oo marti ugu ahayd Stamford Bridge. gool oo uu Ivanovic Chelsea u dhaliyay ayaa u suurtogaliyay inay Liverpool guul kaga gaadho isla markaana ay kugu soo baxdo finalka Capital One Cupka. Chelsea ayaana finalka la ciyaari doonta midka soo baxda Tottenham iyo Sheffied United.Finalka Capital One Cupka ayaa lagu ciyaari doonaa Wembely Stadium iyada oo la ciyaari doono 1 bisha March.
Chelsea ayaa Liverpool Stamford Bridge ku soo dhawaysay kulanka lugta danbe ee koobka Capital One Cupka. kulankii hore ee lagu ciyaaray garoonka Liverpool ayaa ku soo dhamaaday barbaro 1:1 ah. Edin Hazard ayaa chelsa kulankaas rekoodhe u dhaliyay halka uu Sterling Liverpool goolka barbaraha u dhaliyay.
Kulankan ayaa ahaa kulan adag oo ay xamaasad badan ku dheehnayd. Inkasta oo ay Chelsea gurigeeda ay ku ciyaaraysay ayayna haddana qaybtii hore ee ciyaarta samaynin wax bartilmaameed ah, laakiin Chelsea ayaa ku dooday in rekoodhe laga diiday kadib markii uu Skrtel u muuqday inuu qalad ku galay Costa oo ku jiray xerada ganaaxa Liverpool.
Laakiin Costa ayaa nasiib ku lahaa inuu ciyaarta sii watay kadib markii uu si badheedh ah uu lugta iskaga taagay Emre Can, garsoore M.Oliver ayaa labadii dhacdo ee ugu waynaa ku guuldaraystay inuu wax ka qabto. marka hore Costa ayaa casaan toos ah qaadan lahaa halka uu markii danbena Costa rekoodhe loo dhigi lahaa.Arintan ayaa keeni karta inuu Costa dhib kula kulmi karo.
Liverpool ayaana ahayd kooxda halista badan abuurtay qaybta hore ee ciyaarta. Reheem Sterling, Alberto Moreno iyo Couyinho ayaa Liverpool ka qasaariyay fursado dahabi ahaa oo ay goolal ku dhalin lahaayeen. Goolhaye Coutios ayaa markale kooxdiisa ka badbaaiyay laba fursadood oo goolal loo fishay.
Fursada hore ee goolka loo fishay ayaa timid Kadib markii uu Gerrard kubbad qurux badan meel fiican uga saaray Moreno kaas oo kubbad uu meel gaaban kaga darbeeyay goolka Chelsea uu goolhaye Courtios kooxdiisa ka badbadiyay.
Markale ayayLiverpool ku sigatay inay hogaanka ciyaarta la wareegto kadib markii uu Coutinho oo qaab ciyaareed layaableh soo bandhigay uu isku dhex yaaciyay difaaca Chelsea isla markaana uu samaystay banaan fiican taas oo uu guu danbayn goolka si fiican u toogtay, laakiin Coutinho ayaa arkay dadaalkiisii oo ku dhamaaday Courtios.qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barabro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay labada kooxood taxadar badan muujinayeen laakiin waxay noqotay mid ay labada kooxoodba weerar isku qaadayeen, laakiin daqiiqdii 49 aad ayuu Fabregas u muuqday inuu dhaawac soo gaadhay kadib markii ay isku dhaceen John Terry. Terry iyo Fabregas ayaa doonayay inay kubbad ku qabtaan Coutinho balse iyaga ayaa si xun iskugu dhacay. Fabregas ayaana lagu soo badalay Ramires.
Daqiiqadii 57 aad ayaa ciyaarta dhaawac looga saaray Mamadou Sakho, waxaan lagu soo badlay Johnson. kadib markii uu Sakho baxay ayay Chelsea heshay fursadihii ugu fiicnaa.Sterling ayaa helay fursad fiican balse waxaa markale ka badbaadiyay Courtios.
Hazard ku sigtay inuu kooxdiisa Chelsea u dhaliyo goolka furitaanka kadib markii uu si fiican kubbad uga farsamaysay difaaca Liverpool kadibna uu si xoogan kubbada lugta bixid ugu darbeeyay, laakiin kubbad ayaa waxyar u martay birta goolka Liverpool.Frasada ugu fiicnayd uguna halista badnayn ee Chelsea ayuu Blues ka qasaariyay Costa kaas oo kubbad uu kula soo baxay goolhaye Mignolet iska qasaariyay.
waqtiga rasmiga ah ayaa ku dhamaaday barbaro gool la’aan ah taas oo keentay in ciyaarta lagu daro waqtiga dheeriga ah oo 30 daqiiqo ah. Cheslea ayaa qaybtii danbe ee ciyaarta ayayd mid aad uga fiican sidii ay ahayd qaybtii hore ee ciyaarta.Chelsea ayaana ogayd in haddii ay ciyaartu sii ahaato barbaro gool la’aan ah inay marka uu waqtiga dheeriga ahi dhamaado ay ku soo baxi doonto sharciga goolka aad martida ku dhaliso.Costa ayaa markale nasiib ku lahaa inuu haddana ka badbaaday kaadhka cas isaga oo haddana isku taagay Skrtel, waxaana lala yaabay in ciyaar noocan oo kale ah ay arimahan oo kale ka dhacaan.
Skrtel ayaana aad uga cadhooday in aanu garsooruhu wax qicaab ah marinin Costa inkasta oo uu isaguba ka badbaaday in rekoodhe lagu dhigo markii uu isla Costa qalad ku galay. marnaba lama filan karayn in 22 ciyaartoy oo labada kooxood ahi ciyaarta dhamaysteen.
Markii uu waqtiga dheeriga ah ee ciyaarta lagu daray socday saddex daqiio oo kaliya ayuu Branislav Ivanovic kooxdiisa Chelsea hogaanka u dhiibay kadib markii uu kubbad laaga xorta ahayd oo uu soo tuuray Willian uu si fiican madax ugu darbeeyay isla markaana uu kooxdiisa goolka ugu dhaliyay, ciyaarta ayaana noqotay 1:0 ay Chelsea hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Liverpool ayaa waqtiyadii danbe u muuqatay inay daashay kadib markii ay xawaare badan ku socdeen qaybihii hore ee ciyaarta.Chelsea ayaana fursado badan oo ay heshay iska qasaarisay.Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Chelsea guusha ku gaadhay isla markaan ay ugu soo baxday finalka Capital One Cupka. Blues ayaa Wembely Stadium finalka kula ciyaari doonta midka soo baxa kooxah Tottenham iyo Sheffield United.
Algeria Iyo Ghana Oo U Soo baxay Wareega Sideeda Dhamaadka Koobka Qaramada Afrika Iyo Senegal Iyo South Africa Oo Tareenka Ka dhacay
Waxaa xalay lagu kala baxay Group C oo ahaa groupka ugu adkaa kulamada heerka group-yada ee koobka qaramada Afrika. Algeria iyo Ghana ayaa u soo baxay wareega sideed dhamaadka koobka qaramada Afrika halka Senegal iyo South Africa ay shandadahooda ka soo xidh xidhan doonaan tartanka qaramada Afrika.afarta xul qaran ee kuwada jiray Group C ayaa kala ahaa Algeria, Senegal, South Africa iyo Ghana kuwaas ayaa dhamaantood haystay fursad ay ugu soo bixi karayeen wareega sideeda kooxood ee koobka qaramada Afrika.
Senegal ayaa ugu ayaa kulamada ugu danbeeyay ka hor Group C ku hogaaminaysay afar dhibcood, xulka qaranka Algeria oo isaguna laba kulan ka urursaday saddex dhibcood iyo Ghana ayaa ku soo xigay halka South Afrika ay ahayd xulka ugu hooseeyay.
kulanka dhex maray Algeria iyo Senegal ayaa ahaa mid xiiso badan isla markaana ay fursadihii ugu badnaa heshay Algeria. Algeria ayaa ciyaarta hogaanka u qabtay daqiiqadii 11 aad waxaana goolkaas u dhaliyay Riyad Mahrez kaas oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Algeria ciyaarta hogaanka ugu qabtay. Algeria ayaa sidoo kale qaybtii hore ee ciyaarta fursado kale iska qasaarisay. qaybta hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1:0 ay Algeria hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Algeria ahayd markale xulka gacanta sare lahaa waxayna markale abuureen fursado halis ah oo ay goolal badan ku dhalin karayeen. Daqiiqadii 81 aad ayay Algeria heshay goolka kalsoonida oo ahaa mid aad u qurux badan oo gantaal ah u dhaliyay Nabil Bentaleb kaas oo ciyaarta u badalay 2:0 ay Algeria hogaanka ugu raaxaysanayso.
Ugu danbayn ciyaarta dhexmartay Senegal iyo Algeira ayaa ku dhamaatay 2:0 ay xulka qarabnka Algeria ku dubteen Senegal. Algeria ayaa wareega sideed dhamaadka ugu soo baxday lix dhibcood.Algeria ayuu dhaawac ka soo gaadhay xidigooda Yacine brahimi.
Kulanka kale ee isla Group C ayaa dhex maray xulalka qaramada South Africa iyo Ghana. kulankan ayaa ahaa mid adag. xulka qaranka South Africa ayaa goolka ku hormaray, waxaana daqiiqadii 17 aad goolka u dhaliyay Mandla Masango, isaga oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay South Africa hogaanka ciyaarta kula wareegay. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1:0 ay South Africa hogaanka ku haysay.
Qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Ghana soo laabatay iyada oo dhaarsan, waxayna bilawday inay halis badan galiso goolka South Africa. Daqiiqadii 73 aad ayuu John Boye xulka qarankiisa Ghana uu u dhaliyay goolka barbaraha, wuxuuna ciyaarta u badalay barabro 1:1 ah.
Ghana ayaana sii kordhisay weerarka halista ahaa ee ay ku haystay difaaca South Africa, taas oo keentay in daqiqiadii 83 aad ay markale Ghana la timaado goolkeeda labaad iyo kan ay hogaanka ciyaarta kula wareegtay.Waxaana goolka labaad u dhaliyay André Ayew kaas oo goolkii horena caawiye ka ahaa, isaga oo ciyaarta u gadiyay 2:1 ay xidiga madaw ee Ghana hogaanka markooda kula wareegeen.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 2:1 ay Ghana guul soo laabasho ah oo cajiib ah kaga gaadhay xulka qaranka South Africa. Ghana oo halis ugu jiray inay guuldaro kala kulanto S.Africa ayaa group C kaga soo baxday lix dhibcood waxayna isku dhibco ku soo baxeen Algeria.
Hordhaca Group B: Cape Verde Vs Zambia, DR Congo Vs Tunisia Iyada Oo Caawa Lagu Kala Bixi Doono Group B
Koobka qaramada Afrika ee 2015 ayaa si habsami ah uga socda wadanka Equatorial Guinea. Waxaa xalay lagu kala baxay Group A waxaana wareega sideed dhamaadka tartanka koobka qaramada Afrika tikidhka u sii goostay xulka qaranka koobkan marti galinaya ee Equatorial Guinea iyo xulka qaranka Congo.
Waxaa caawana lagu kala bixi doonaa Groupka B oo ay kuwada jiraan xulka qaranka Tunisia, Zambia, DR Congo iyo jasiirada Cape Verde.Tunisa ayaa afar dhibcood Groupkan ku hogaaminaysa iyada oo fursad fiican u haysata inay u soo baxdo wareega sideed dhamaadka koobkan qaramada Afrika.
Kulanka: Cape Verde Vs Zambia
Groupka: Group B wareeega 16 ka kooxood
Waqtiga: 8:00 Fiidnimo ee Saacada Geeska Afrika
Haddii xulka qaranka koobkan difaacanaya ee Zambia uu doonayo inuu soo gaadho wareega sideeda kooxood waxaa qasab ku ah in ay guul ka gaadho xulka qaranka Jasiirada Cape Verde. Zambia oo koobka qaramada Afrika ku guulaysatay sanadkii 2012 ayaa ku dhibtoonaysa tartanka koobka qaramada Afrika ee 2015 iyada oo hal dhibic oo kaliya ka heshay labadii kulan ee ugu danbaysay.
Haddii ay Zambia guul ka gaadho Cape Verde ayay waliba u baahan doontaa inaysan Tunisa guuldaro ka soo gaadhin DR Congo, sidaa daraadeed inay wareega sideed dhamaadka u soo baxdaa gacanteeda oo kaliya kuma jirto. Zambia ayuu dhaac kaga maqnaan doonaa Emmanuel Mayuka kaas oo uu dhaawac ka soo gaadhay kulankii uu goolka ka dhaliyay Tunisa.
Cape Verde ayaa dhankeeda u baahan inay guul ka gaadho Zambia si ay u xaqiiqsato inay soo gaadho sideeda dhamaadka markii labaad oo xidhiidh ah inkasta oo ay barbarana ku soo bixi karto. Zambia iyo Cape Verde ayaa hore iskugu soo arkay isreeb reebkii loogu soo baxayay tartankan koobka qaramada Afrika iyada oo xulkastaaba gurigiisa guulku soo gaadhay.
Kulanka: DR Congo Vs Tunisia
Tunisia ayaa guul ay ka gaadho DR Congo ay u xaquujin doontaa inay soo gaadhaan wareega sideed dhamaadka koobka qaramada Afrika, laakiin Tunisa ayaa sidoo kale barbaro ku soo bixi karta haddii ayna Cape Verde guul ka gaadhin Zambia.
Tababaraha Tunisia ee Leekens ayaa ku adkeeyay ciyaartoydiisa inay guul ka gaadhaan DR Congo si ay ugu soo baxaan wareega sideeda kooxood ee koobka qaramada Afrika.
Leekens ayaa yidhi: “ Haddii aanu ciyaartan tagno anaga oo aaminsan in aanu nahay kooxda ugu cad cad taasi waxay keeni kartaa in aanu qalad samayno”.
Tunisia ayaa saddexdii kulan ee ugu danbaysay ee ay iska hor yimaadaan DR Congo ayay Tunisia soo guulaysatay laba kulan oo ka mid ah halka kulanka saddexaad uu ku dhamaaday barbaro. DR Congo ayaa laba kulan oo kaliya guulaysatay tartanka qaramada Afrika taniyo sanadkii 1998 kii markaas oo ay tartanka ka galeen kaalinta saddexaad.
Haddii ay DR Congo barbaro la gasho Tunisia waxay noqon doontaa xulka kaliya ee lix kulan oo tartanka koobka qaramada Afrika ah barbaro galay laakiin tababaraha DR Congo ee Florent Ibenge ayaa aaminsan in kooxdiisu garaaci karto Tunisia isla markaana ay u soo bixi karaan wareega sideeda kooxood.
Florent Ibenge ayaa yidhi: “Koox waliba waxay garaaci kartaa koox kasta.Waa inaanu aaminaa xoogeena iyo awooda aanu leenahay, waana inaanu arintaa garoonka ku muujinaa”.
DR Congo ayaa ku rajo wayn in xidigooda Youssouf Mulumbu uu taam u noqdo kulanka Tunisia kadib dhaawac soo gaadhay.